ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 14, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015
ဒေါက်တာ Todd'sအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောခြေထောက်စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများအတွက် e-commerce site တစ်ခုဖြစ်လာသည် ပိုးသတ်ဆေး ထုံးစံကို web စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထုပ်သည်။ Dr. Todd ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရောနှောမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာဗျူဟာအသစ်၊ ဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးအယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြက္ခဒိန်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ Dr.Dod ရဲ့ပရိုမိုးရှင်းအီးမေးလ်တွေထဲကတစ်ခုကိုလူတွေကဘာတွေနှိပ်ပြီးပြောင်းလဲအောင်လုပ်တာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်။
သငျသညျ "ကူပွန်၏ gamification" ဟူသောဝေါဟာရကို Groupon ဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သင်ကြားဖူးပေမည်။ လူတွေဟာအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုငါတို့အားလုံးသိပေမယ့် Groupon လိုတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကသင့်ရဲ့နက်ရှိုင်းစွာ - လျှော့စျေးနှုန်းရဲ့ထက်ဝက်ခန့်နဲ့လမ်းခွဲဖို့လိုတယ်။ Groupon ကဲ့သို့သောမြှင့်တင်ရေးကိုဖန်တီးရန်ကိစ္စရပ်များကိုသင်၏လက်ထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ blog လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီမှာဥပမာပြရမယ်။ ပုံမှန်ထက် ပိုမို၍ အကြီးအကျယ်လျှော့ချခြင်းနှင့်၎င်းကို ၂၄ နာရီကျော်အထိကန့်သတ်ခြင်းသည်အမိန့်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မင်းကခေါင်းတလားလားပုံနှိပ်စက်လား။ လူအမျိုးမျိုးကအကြောင်းအရာအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဆီသို့ဆွဲဆောင်သည်။ မည်သည့် link အမျိုးအစားသည်သင်၏အထူးသဖြင့်ပရိသတ်မှမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအများဆုံးဆွဲယူသည်ကိုသင်အမြဲတမ်းစမ်းကြည့်နိုင်သည်၊ သို့သော်အကောင်းဆုံးနည်းပရိယာယ်သည် link တစ်ခုတည်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများပေးရန်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်၊ ပုံ၊ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်နှင့် Shop Now ခလုတ်အားလုံးကုန်ပစ္စည်းနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအာမခံချက် (သို့) လွယ်ကူစွာပြန်လာသည့်မူဝါဒတို့ပါ ၀ င်သည့်ဘာသာစကားသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းသောစျေးဝယ်ခြင်းအတွက်သတ်မှတ်သည်။ အရောင်လည်းအဓိကအခန်းကဏ္ play မှကစားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာလိမ္မော်ရောင်သည်လုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်။
အကယ်၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး ကသင်၏အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ရန်လုံလောက်သောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ပါက၎င်းတို့ကိုသင် Facebook တွင်လည်းနှစ်သက်နိုင်သည်။ သင်၏ဘလော့ဂ် (သို့) လူမှုရေးပရိုဖိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည် ၀ ယ်သူများထက် ၀ ယ်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ပါ ၀ င်ရန်ဖောက်သည်များကိုဖိတ်ခေါ်သည်။
အရင်တုန်းကပို့တဲ့အကြိမ်တွေ၊ ဘာသာရပ်လိုင်းတွေစတာတွေစပြီးပြီ။ ဒီလျှော့စျေးနည်းဗျူဟာအသစ်ကိုငါတို့စမ်းသပ်တဲ့အခါ၊ စာရင်းခွဲခြားမှုကိုလည်းစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ Dr. Todd ၏အီးမေးလ်စာရင်းမှ callus ကုသမှုအတွက်အမှာစာသမိုင်းရှိဖောက်သည်များစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသည်။ ရေရှည်တွင်မှန်ကန်သောအကြောင်းအရာများကိုမှန်ကန်သောအဆက်အသွယ်များသို့ပို့ခြင်းဖြင့်သင်ငွေစုနိုင်သည်။
အလားတူထုတ်ကုန်များ၏မှာယူမှုသမိုင်းနှင့်အတူဖောက်သည်တစ် ဦး ရှိခဲ့ပါတယ် ပွင့်လင်းမှုနှုန်းအတွက် 11% ဓာတ်လှေကား။ ကလစ်နှိပ်လိုက်သောနှုန်းထားများမှာ ပို၍ ပင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ အထွေထွေစာရင်းရရှိခဲ့သည် ၁၃% ကိုနှိပ်ပါအဆိုပါ segment စာရင်းတစ်ဖလားကိုရယူနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ၇၂% ကနှုန်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
နှင့်ရောင်းအား? ကျွန်ုပ်တို့သည် ၆ လအချက်အလက်များကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ ဒီအီးမေးလ်စတင်ချိန်၏ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ရောင်းအား ၉၁% တိုးတက် ပျမ်းမျှဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျော်။
ဤနည်းဗျူဟာသည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ Dr. Todd's ကိုယေဘူယျအီးမေးလ်ပုံစံမှအဆင့်မြှင့်ထားသောအီးမေးလ်ပရိုဂရမ်သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးကတည်းက အီးမေးလ်ဖြင့်လည်ပတ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာ ၂၅၆ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာ.
ပမာဏ ရောင်းအားသို့ပြောင်းလဲမှုသည်အံ့အားသင့်စရာ ၃၈၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။.
Tags: ကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်းနှုန်းကိုကလစ်နှိပ်ပါCTRအီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်စာရင်း
19:2011 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 17
အံ့သြဖွယ်ရလဒ်များ… ကလစ်နှုန်းထားများနှင့် အခြားအရာများအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကို တိုင်းတာနိုင်သော အခြားနည်းလမ်းများ။